कसरी वयस्क मा ठेउला व्यवहार गर्न: केही subtleties
ठेउला - धेरै मानिसहरू यो गम्भीरतासाथ लिन छैन भनेर सामान्य रोग। यो रोग एक बच्चाको रूपमा बिरामी भएको थियो भन्ने तथ्यलाई कारण छ, तपाईं सधैंभरि यसको बारेमा भूल गर्न सक्नुहुन्छ। तर भाइरस को सबै varicella zoster भाइरस बाल्यकाल मा हडताल। कहिलेकाहीं बिरामी वयस्क ठेउला। रोग को नतिजा जटिलताहरुलाई जोखिममा छन्।
कसरी उपचार गर्न जान्न वयस्क मा ठेउला, यो वयस्क जीवनको यो रोग को विशेषताहरु सजग हुन आवश्यक छ। यो रोग हावा मार्फत प्रसारित छ। र यो खतरनाक छ: मान्छे अझै पनि उहाँले बिरामी थियो शक गरे सक्छ, तर पहिले नै उहाँको वरिपरि मानिसहरूलाई संक्रामक हुन। यो गर्मी चालू (latent) रोग को अवधि नै प्रकट गर्दैन भन्ने तथ्यलाई कारण छ। कुनै blisters र फ्रेंच को भावना, तर भाइरस पहिले नै आफ्नो शरीर बस्ने छ। रोग ठेउला संग बच्चा जस्तै हुन सक्छ प्राप्त गर्न र shingles देखि एक रोगी दुःख बाट। यी रोगहरु एक साधारण रोगजनक। वयस्क मा ठेउला को पहिलो संकेत छोराछोरीको लक्षण धेरै फरक छैन। मानिस पनि अनुभव फ्रेंच, दुखेको घाँटी, ज्वरो बर्ष। तापमान तेजी 40 डिग्री को एक आतंकित गर्नु आंकडा तिर creeping छ, र त्यहाँ शरीरमा गुलाबी रंग को specks छन्। पहिलो तला, तिनीहरूले हाम्रो आँखा अगाडि बढ्दै छन्। घण्टा भित्र, तिनीहरूले एक पानी जस्तो तरल पदार्थ भरिएको छन्। दिन को एक जोडी पछि blisters अप सुक्खामा, तर पहेंलो-खैरो crusts एक लामो समय को लागि बाँकी छन्। यो अन्य तरिकामा उपचार वयस्क रोग को बच्चाहरु प्रकारको र ठेउला संग समानता समाप्त हुन्छ।
रोग को पाठ्यक्रम
निस्सन्देह, तपाईंले अस्पताल सम्पर्क गर्दा तपाईं एक पटक मात्र दिन छैन अशक्तता एक पाना, तर तपाईं अरूको स्वास्थ्य एउटा सीधा खतरा हो पनि, संगरोध नियुक्त। यो बिरामीको अवस्था धेरै गम्भीर छ तुरुन्तै बताए हुनुपर्छ। कसले कसरी वयस्क मा ठेउला व्यवहार गर्न थाह कुनै उपचार हामीलाई गंभीर खुजली देखि सुरक्षित छैन भन्ने तथ्यलाई भने। तर बुलबुले combing कुनै पनि मामला मा हुन सक्दैन। यो तीन जटिलताहरू गर्न सक्छ। scratched यदि भन्दा अहानिकारक scars, blisters को गठन छ। नै यो खतरनाक छैन, तर कस्मेटिक प्रभाव पनि, छैन अनदेखी गर्नुपर्छ। धेरै पनि छाला बहाली लागि कस्मेटिक प्रक्रियाहरु पछि तिर्नुपर्छ। अर्को जटिलता खुले pores मार्फत combing समयमा धेरै सजिलै भित्र पस्नु र festering हुन सक्छ कि एक संक्रमण हुन सक्छ। र तेस्रो, सायद सबैभन्दा डरलाग्दो: varicella encephalitis। त्यसैले यसलाई मस्तिष्क को सुनिंनु भनिन्छ।
कसरी वयस्क मा ठेउला उपचार गर्न?
उपचार मुख्यतया स्वच्छता मा हुन्छन्। डाक्टर एन्टिबायोटिक तापमान सल्लाह दिन्छन् सक्छ कम गर्न। Blisters रूपमा चाँडै सम्भव Zelenko रूपमा प्रशोधन गर्नुपर्छ। खुजली राहत कहिलेकाहीं एलर्जी औषधी गर्ने सल्लाह दिन्छन्। तपाईं पनि यस उद्देश्यका लागि पुरानो सिद्ध उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: पतला सिरका उसिनेर पानी संग inflamed क्षेत्रमा हटाउन। यो उपचार छाला पछि यो पाउडर छिडकना गर्न मनमोहक छ। बस फैंसी आज सुगन्धित पाउडर र पाउडर प्रयोग नगर्नुहोस्। सामान्य रोग सुट समयमा, फार्मेसी मा किनेको।
ठेउला को रोकथाम
आफूलाई रोग बाट सुरक्षाको लागि, प्रतिरक्षा प्रणाली उठाउनु र राम्रो व्यक्तिगत स्वच्छता कायम गर्न पर्याप्त छ। सडक बाट घर आउँदै, तपाईंको हात धुन निश्चित हुनुहोस्। र त्यसपछि, एकदम संभवतः, ठेउला आफ्नो पक्षमा छल्न, र तपाईं कसरी वयस्क मा ठेउला व्यवहार गर्न अनुरोध छैन।
Febrile दौरा शामिल: पहिलो सहायता
बायाँ मृगौला को Hydronephrosis: etiology लक्षण
तीन-wheeled कार्गो बाइक: लक्षण, वर्णन, फोटो
यो सम्भव स्तनपान गर्दा रक्सी छ? म कफी सुत्केरी आमाले पिउन सक्नुहुन्छ? GW मा भोजन
आफ्नो हातमा एक काठ घरमा Windows को स्थापना